☆Igumbi elipholileyo elisedolophini, indawo yokupaka yasimahla☆
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguPierre
Yiza ubeke iisutikheyisi zakho kule flethi ilungiswe ngokupheleleyo ngezinto ezikumgangatho ophezulu.
Yonke into icingelwe ukuba uthuthuzeleke kakhulu, indawo yokulala nayo intsha kwaye ikumgangatho olungileyo kakhulu, ibhedi iya kulungiswa ekufikeni kwakho.
Eli gumbi linomtsalane likwisakhiwo esikufutshane nombindi wesixeko, kufutshane kakhulu necathedral, iibhanki zeOdet, kunye neendawo zokutyela ezininzi.
Paka isithuthi sakho kwindawo enkulu yokupaka yasimahla kufutshane nefulethi.
Ezicwangciselwe abahambi-2, lo studio 27m² ibandakanya kwigumbi lokuhlala yayo kunye nekhitshi evulekileyo (Isitovu segesi yodongwe, wefriji kunye isikhenkcezisi ezihlangeneyo, microwave pfumerile, ikofu, uMenzi ngetoaster, iketile, electric citrus cofa, neepani, amacephe, iiglasi ...), a Indawo yokulala kunye negumbi lokuhlambela iWC (iyunithi engamampunge, ibhafu, iWC, umatshini wokuhlamba, isomisi seenwele)
Iitawuli zokuhlambela, amalaphu okuhlamba
ishampoo kunye nejeli yokuhlamba
Iphepha langasese, i-sopalin
Ikofi, iti, iswekile, ityuwa, ipepile, ioli
Kufuphi nendawo yokuhlala kukho ipaki yemoto enqabileyo yasimahla kumbindi wesixeko saseQuimper (ipaki yemoto yerouget de l'isle) kungenjalo ipaki yemoto ide la Providence okanye idu cinéville ikufuphi nayo, bahlawula ukusuka ngoMvulo ukuya ngoMgqibelo ukusuka nge-9 ekuseni. 12 pm 2 ntambama ku 5 ebusuku
Indlu ifumaneka kwi-4kms ukusuka kwi-SNCF kunye nesikhululo sebhasi, kunye ne-12kms ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya sasePluguffan.
Ukuba ufuna ulwazi oluthe kratya, ungalibazisi ukuqhakamshelana nam.
Isikhululo sokutshaja iimoto zombane siyafumaneka kwi-car park right next to accommodation (rouget de l'isle car park).